Fandalovan'ny Ray Masina - Fannie Ratsiory, voafidy handray tanana an’i Papa Fransoa - L'Hebdo de Madagascar
Fandalovan’ny Ray Masina – Fannie Ratsiory, voafidy handray tanana an’i Papa Fransoa
Hitondra ny teny fiarahabana, Ratsiory Fanomezanjanahary Tsiadino Fannie, tovovavy telo ambin’ny folo taona. Hisolo tena ireo ankizy maro be beazina eny amin’ny toby Akamasoa, Andralanitra, tantanan’i Mompera Pédro izy. Ny taona 2013 no nifindra monina teny amin’ny toby Akamasoa ny reniny sy izy efatra mianadahy. Mpitarika mafana fo amin’ny fanompoam-pivavahana ao amin’ny Lasapely, isan-kariva i Fannie. Mazava tsara ny feony mandritra ny ranom-bavaka. Sambany teo amin’ny fiainany izany handray fitenenana imasom-bahoaka sy olona marobe izany.
M andritra ny fitsidihana apostolika ataon’ny Filohan’ny eglizy katolika Papa Fransoa eto Madagasikara dia anisan’ny tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoanany ny hitsidika ny toby Akamasoa eny Andralanitra, tantanan’i Mompera Pédro. Handray anjara fitenenana amin’ny fiarahabana tonga soa sy fisaorana ny Ray Masina, amin’izao nisafidianany ny hitsidika ny toby Akamasoa izao, Ratsiory Fanomezanjanahary Tsiadino Fannie.
Nisara-bady ny ray aman-drenin-dRatsiory Fanomezanjanahary Tsiadino Fannie, tovovavy telo ambin’ny folo taona. Efatra mianadahy no iray tampo ka vavimatoa i Fannie. Tany Antsiriribe, distrikan’Antanifotsy no nahaterahan’izy efatra mianadahy. Nandao ny tokantrano ny rainy noho ny olana teo amin’izy mivady. Nanapa-kevitra, Razanadraibe Herline, renin’i Fannie fa hiakatra aty andrenivohitra noho ny fahakelezan’ny tany hambolena ka tsy mahavita taona ny vokatra miakatra. Asa an-trano no vahaolana hitany satria tsy manana diplaôma na maripahaizana hidirana hiasa am-birao izy.
« Tapitra notetezina avokoa ny fokontany noheverina fa hahitana asa teto Antananarivo. Tsy nisy nety nandray anay ny olona noho ny fahamaroan’ny zanako », hoy Razanadraibe Herline, mitantara ny fahasahiranany sy ny fijaliany natory teny amoron-dalana. Nisy tsy salama aza ny iray tamin’ireo zanany tamin’io fotoana io. Nisy olona nanoro hevitra an-dRazanadraibe Herline, ny taona 2013, ny handehanany eny amin’ny toby Akamasoa. Nomen’i Mompera Pédro, ny tranon’ny mpianatra izy dimy mianaka. « Afaka ny fahasahirananay nanomboka teo. Mitovy zo amin’ny ankizy rehetra ny zanako. Mianatra avokoa izy efatra mianadahy amin’izao fotoana ary izaho mpahandro ny sakafo eto amin’ny toby. Tsy karama ny anay fa fanampiana. Tsy mpampiasa Mompera Pédro fa manampy ny sahirana toa anay », hoy Razanadraibe Herline. Feno enina taona, Ratsiory Fanomezanjanahary Tsiadino Fannie no tonga nipetraka teny amin’ny toby Akamasoa. Mandray anjara amin’ny fanompoam-pivavahana isa-kariva ao amin’ny Lasapely, ny tovovavy, indrindra amin’ny fotoanan’ny ranom-bavaka. « Tiako ho azo ny fiadanana ary ny fanantenana amin’ny fiainan-ko avy fa hahazo ny fanjakan’ny lanitra », hoy Ratsiory Fanomezanjanahary Tsiadino Fannie, mitsikitsiky sy matotra amin’ny fomba firesaka. Voataiza ara-batana sy ara-panahy ny ankizy mipetraka eny amin’ny toby Akamasoa. Manana asa avokoa ny ray aman-dreniny. « Tsy mbola namerin-kilasy izany i Fannie satria 16 na 17 ny salan’isa azony isaky ny fanadinana. Mamporisika ny ankizy hivavaka sy hianatra tsara ihany koa i Fannie fa mafy tamin’izy ireo ny làlana nolalovany vao tonga amin’izao iainany ankehitriny izao », hoy hatrany Herline, mahatsiaro ny fizotran’ny fiainany. Mihiratra ny masoandrompiainan-dRazanadraibe Herline raha mitaha ny fiainany taloha raha ny filazany hatrany.
Zava-dehibe eo amin’ny fiainan-dRatsiory Fanomezanjanahary Tsiadino Fannie, ny fandalovan’ny Filohan’ny eglizy katolika Papa Fransoa eto Madagasikara. Izy no hisolo tena ny ankizy hiarahaba ny Ray Masina. « Rehefa mivavaka dia misy ny valim-bavaka toy ny fahazoana fahasalamana. Ny tanjona dia ny hahatratrarako ny fahaizana tenim-pirenena vitsivitsy. Any aoriana any ka tafita amin’ny fianarana sy mahatratra ny tanjona niriako aho dia hiverina eto mba hanampy an’ny Mompera ary handray vahiny toa izao ihany koa, anisan’ny vavaka fangatahana ataoko rehefa mivavaka », hoy Ratsiory Fanomezanjanahary Tsiadino Fannie. Nifantsika tao an-tsaindRatsiory Fanomezanjanahary Tsiadino Fannie ny fahoriana nentin’izy dimy mianaka, fony tonga teto an-drenivohitra. Tafo lanitra sy teny amorondalana no natory izy mianakavy. Tsy manana ny ho enti-manana ny hividy fitafiana vaovao ny reniny. « Tsy misy fiomanana be amin’ny fitafiana hanaovana fa atao madio fotsiny. Ny zava-dehibe dia izaho voasafidy tamin’ny ankizy maro be eto amin’ny toby Akamasoa handray fitenenana amin’ny olona manan-kaja sy ambony », hoy hatrany Fannie. Tian’i Fannie raha misy ankizy toa azy mba ho modely tia fivavahana sy hanankina ny fiainany amin’Andriamanitra. Hisy ihany koa olona mitovy tarigetra amin’ny Mompera Pédro, eto Madagasikara, namarana ny teniny
Vonjy Andriamanga – Par ici la diversion
Hebdox de Mamy Andrianarison